Umbusi wezizwe, ukuze uchungechunge wesihlanu izimoto ezikhiqizwa oqala yoma ekuqaleni kwekhulu elidlule. Ngokusho izici zayo BMW 520 libhekisela imishini zabantu abasesigabeni esiphakathi zaziba. Lokhu kusho ukuthi ukusebenza ivolumu yenjini kulezi izimoto zokhahlamba kusuka cubic amasentimitha 1,700 ukuze 3,000. Ngaleyo minyaka yezimoto umkhakha focus ubelokhu izinga imishini high-speed. Ukuhlola BMW 520, okuyinto Izibuyekezo lingama omuhle, kungenzeka uye waphawula ukuthi kungenzeka ukuba ukhule ufike amakhilomitha kuze kube ezingamakhulu amabili ngehora. Ngamanye amazwi, e ukugeleza jikelele imoto emgwaqweni ubelokhu eyenzeke yayo phakathi laggards awavelanga.
Umncintiswano emakethe yezimoto ngokuhamba kwesikhathi kuzokhulisa kuphela. Ukushintsha izinto eziza kuqala futhi tekucubungula. Yini wake kubhekwe izolo eyanele, ayisekho ihlangabezana umthengi wanamuhla. BMW 520, ivela kuhambisana mikhuba emisha, washintsha ezakheke zangaphandle kanye nokuqukethwe yangaphakathi. Eqhubeka ukhulume injini, kumele wathi, ukuthi onobuhle ezahlukene imoto kwaba ifakwe 4-futhi 6 cylinder esebenzisa u-petrol izinjini. abanikazi Russian lokhu model Kuyaziwa ukuthi ezingxenyeni eziningi "Moskvich" ingasetshenziswa for ukukhanda elula emotweni yakho. Omunye endaweni efanelekayo valve cap indlela.
Njengengxenye maintainability ingxoxo imoto kufanele kuphawulwe ukuthi ngaphambili ingxenye gumbi abagibeli BMW 520, kuhlanganise amaphiko, ayebuthene imishudo. Uma kudingekile, yonke isakhiwo kungenziwa zezikhali kalula. Ngemva eqondisa zonke izinto ezilimele ebuyiselwe kalula. Kule minyaka 10 - 15 iminyaka, wathola ukuthuthukiswa inethiwekhi ukulungisa izitolo kanye amagalaji enamandla. imishini ukulungisa ezimweni esikhashana abathintekayo, ikakhulukazi ngenxa yesidingo, amakhosi ambalwa kakhulu. Njengengxenye yalolu mkhuba, inkampani BMW nayo ukwakha inethiwekhi wabenza kanye nezikhungo zomsebenzi.
Uma siqhathanisa BMW 520, isithombe onobuhle yesimanje kanye amasampula zeminyaka eyedlule, umehluko kuyoba abalulekile. Kulo mongo kubalulekile ukuphawula akukho izinguquko zangaphandle, futhi ulwazi. Ngoba okwamanje ligxile ukuphepha kwabantu emotweni, onjiniyela wafika ekuxazululeni le nkinga sina nangokuhlakanipha. Okokuqala nje kubalulekile ukuphawula trifle ezifana isikhumbuzi kohlelo ukuthi amabhande esihlalweni kungukuthi esigaxe. Prakthiza kufakazela ekholisayo: uma ibhande is hhayi esigaxe, ezinye izinhlelo ukuvikelwa nje ulahlekelwe ukusebenza kwabo.
onobuhle yamanje BMW 520 ifakwe ezimbili isigaba -airbag, okuyinto kuto frontally phambi umshayeli nomgibeli. I-airbag ohlangothini asezindaweni iminyango. I nebhande lesihlalo semoto umshayeli ifakwe pretensioner ezimbili-level. Kuyinto kudingekile kuphela ukulandela imithetho kanye ukushayela ngemuva zonke ezizibeni benzelwe wawusesimweni. imoto Saloon ifakwe izakhi for axube izihlalo ingane. Ukuhlolwa emandleni umzimba kanye nokuphepha imoto abazenzi njalo. Imiphumela yabo makwaziwe yibo bonke abathintekayo. Ayathanda ikakhulukazi labo abahamba ukuthenga imoto.
Vaz 21120 - esikhanyayo isihlobo esikhulu umndeni
Schumacher nabanye: incazelo kanye nemvelaphi yamagama eyaziwa German
Umanyolo Liquid: igama, isicelo. Stimulators zokukhula isitshalo